About Us - Ningbo Hilectro Amandla Tecnology Co., LTD
Ibhizinisi enkulu ye-Haitian-Drive
Ningbo Hilectro Power Technology Co., Ltd iyona ibhizinisi eyinhloko Haitian-Drive, ngubani ezikhethekile yokukhiqiza i Forklift kagesi, Isitaki, landscape imoto, golfcart inkampani etc.The is ukunamathela ifilosofi Haitian Iqembu "High Quality, ukusebenza kahle eliphezulu futhi amandla ukulondoloza ", futhi kuhloswe ngaso usinika imikhiqizo engcono kakhulu ekilasini ukuze amakhasimende.
I ovuthiwe ekuthuthukiseni inkundla Haitian Group
Wencike ovuthiwe platform ekuthuthukiseni Haitian Group, Hilectro Power Technology ine controller.professional motor yokukhiqiza ithimba self-athuthukile, lagre uthayela nokudweba workshop.At esifanayo, inkampani lucwaningo ISO: 9001 izinga nohlelo lokuphatha strictiy, pursuiting ngcono izinga njalo.
Le nkampani elise Embonini Zone of Beilun okuyinto ingenye izimbobo ezinkulu emhlabeni wonke. Le ndawo ifektri usibekela 110 thous square meters.Equipped nge multi zokukhiqiza imigqa umthamo lakhe lonyaka iphelile 10 thous amasethi forklifts, inkampani eziphambili ukuhlolwa isikhungo ngesikhathi esifanayo.
High izinga R & D Ithimba
Iqoqa ne abaqondisi professional, inkampani has a ekupheleni okusezingeni eliphezulu R & D Ithimba. Ngokuhlanganisa isipiliyoni ezifuywayo kwezilwandle, iqembu liyathuthuka izinga forklifts ngokuqhubekayo, futhi tyring ukuba zibalwa ku abahlinzeki phezulu kule mboni.